I-DJI izovumela ama-drones ayo ukuthi andize ngaphandle kokufinyelela kwi-inthanethi | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Enye yezinkinga ezinkulu onazo đi Kuma-drones abo kunembile ukuthi, ukuthumela isignali kusuka kusilawuli kuye kudivayisi uqobo ukuyikhomba lapho sifuna khona, kuyadingeka ukusebenza ngamasiginali wedatha, imvamisa ukuxhumana kwe-WiFi okuthi, ngenxa yokwakhiwa kwayo nendlela esebenza ngayo, kungenziwa zangena kuma. Ngakolunye uhlangothi, kuyiqiniso futhi ukuthi izinhlelo eziningi ze-DJI kumele zixhunywe ku-inthanethi ngaso sonke isikhathi, omunye umthombo wezinkinga.
Kokunye ukukhishwa kwabezindaba kwakamuva okukhishwe yinkampani yaseChina, kusobala ukuthi sebeneqembu elikhethiwe lonjiniyela babo namuhla futhi sebevele besebenza ekwakhiweni kwenuhlelo olusha lokuxhumana phakathi kwesilawuli ne-drone okuvumela lezi ukuthi zisebenze ngokunembile ngaphandle kwesidingo sokuthumela idatha ngenethiwekhi, yona ezokwenza izinhlelo zokulawula izindiza zisheshe futhi zisebenziseke kakhulu.
I-DJI isivele isebenza ngendlela entsha yokuxhumana ngaphandle kwesidingo sokuxhumeka kwe-inthanethi
Ngokusobala, umqondo abasebenza kuwo ku-DJI ugxile kakhulu ekunikezeni abashayeli bezindiza ubumfihlo nokuphepha okuningi kwezokuxhumana. Kodwa-ke, kusazobonwa ukuthi konke lokhu kuzosebenza kanjani njengoba iningi lezinhlelo ze-DJI kumele zisebenzise i-inthanethi, ngokwesibonelo ukufinyelela kumamephu asendaweni, izindawo ezingahambi ngezindiza kanye neminye imininingwane engenza kube lula ukundiza okuphephile kwawo wonke umuntu. abathintekayo.
Njengoba wazi, emasontweni ambalwa edlule, kumenyezelwe into efana kakhulu ne-DJI yize lesi sithembiso se ukuvela kwesoftware yakho kudlulela phambili kakhulu. Ngokuqondile, esikutholayo namuhla kungenye indlela yokubuyisa lapho izinhlelo zingathumeli noma zamukele noma yiluphi uhlobo lolwazi oluvela kwi-Intanethi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » drones » I-DJI izovumela ama-drones ayo ukuthi andize ngaphandle kokufinyelela kwi-inthanethi
UDelio Alanis kusho
Izipho zochungechunge lwe-DJI Phantom azidingi ukuthi zixhunywe kwi-Intanethi ukuze zindize. Umshini ufakwa kumodi yendiza futhi ukundiza ngaphandle kwezinkinga. Unganikeli ngemininingwane engamanga ...
Phendula uDelio Alanis
Ama-drones ochungechunge lwe-DJI Phantom awadingi ukuthi axhunywe kwi-Intanethi ukundiza. Umshini ufakwa kumodi yendiza futhi ukundiza ngaphandle kwezinkinga. Unganikeli ngemininingwane engamanga ...
UJuan Luis Arboledas kusho
Awuqondanga ukuthi okufakwayo kukhuluma ngani.
Phendula uJuan Luis Arboledas
UMarcelo ferreyra kusho
"I-DJI izovumela ama-drones abo ukuthi andize ngaphandle kokufinyelela kwi-inthanethi" Inothi kungenzeka ukuthi liqinisile kepha isihloko asilungile ... ungahlala undiza ngaphandle kokufinyelela kwi-inthanethi.
Phendula uMarcelo Ferreyra
UCarlos p kusho
I-Clickbait enezihloko ezisematheni ezibiza ithrafikhi .. yikuphi ukuzimela, futhi akufanele kube nokuthile okundizayo nokukhulumayo
Phendula ucarlos p